नेपाल आज | जसले एमाले र माओवादीबीच एकता हुनै सक्दैन भनेका थिए
जसले एमाले र माओवादीबीच एकता हुनै सक्दैन भनेका थिए
काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता घोषणा बिहीबार हुँदैछ । यी दुई पार्टीबीच एकताको कुरा चलिरहँदा केही नेताहरु, विश्लेषकहरुले यी दुई पार्टीहरुबीच एकता हुनै नसक्ने बताएका थिए । ती थिएः
प्रदीप नेपालः नेकपा एमालेका नेता प्रदीप नेपालले पार्टी एकता असम्भव त भनेका थिएनन् । तर उनले जनताको बहुदलीय जनवाद छोडेर पार्टी एकता हुन सक्दैन भनेका थिए । तर एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद छाड्ने भएको छ । माओवादीले प्रचण्डपथ छाड्ने भएको छ । दुवै पार्टी मिलेर नयाँ मार्गचित्र बनाउने भएका छन् ।
डा. सुरेन्द्र केसी, विश्लेषकः राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले पनि यी दुई पार्टीबीच पार्टी एकता हुनै नसक्ने बताउने गरेका थिए । चुनावी तालमेलसम्म ठीकै हो त्यो भन्दा बढी केही हुन नसक्ने डा. केसीको पनि विश्लेषण थियो । उनले दुई पार्टीबीच नीति, सिद्धान्त आदि नै नमिल्ने भएकोले एकता सम्भव नभएको बताउने गरेका थिए ।
चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष जनमोर्चाः जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि एमाले र माओवादी मिल्न नसक्ने बताएका थिए । उनले चुलोचौको मिल्दैमा पार्टी एकता हुन नसक्ने विश्लेषण गदैै भन्ने गरेका थिए, ‘नीति सिद्धान्त नमिलेसम्म पार्टी एकता कसरी हुन्छ ? यी दुई पार्टीबीच त्यही कुरा मिलेको छैन । यसकारण पार्टी एकता हुँदैन ।’
पशुपति शमशेर राणा, अध्यक्ष राप्रपा प्रजातान्त्रिकः राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले पनि दुई पार्टी एक हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै आएका थिए । उनले चुनावी तालमेल पार्टी एकतासम्म पुग्न नसक्ने ठोकुवा गर्थे ।
राधाकृष्ण मैनालीः राधाकृष्ण मैनालीले पार्टी एकता नै हुँदैन त भनेका थिएनन्, तर धेरै खाले शर्त पूरा नभएसम्म पार्टी एकता हुँदैन भन्ने गरेका थिए । त्यस्तैगरी उनले केपी ओलीको छवी अस्थीर भएको दावी गर्दै एकतामा शंका व्यक्त गरेका थिए ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता नेकपा माओवादी केन्द्रः नारायणकाजी श्रेष्ठले विचारलाई गलाएर पार्टी एकता नहुने बताएका थिए । तर अहिले एमालेले जबज, माओवादीले प्रचण्डपथ गलाएर एकता गर्दैछन् ।
भरत दाहाल, राजनीतिक विश्लेषकः राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले पनि वाम एकता नहुने विश्लेषण गरेका थिए । उनले माउन्टेन टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै यस्तो दावी गरेका थिए ।